Indawo yokucasha yasepulazini yangempela, ebekwe eduze nemithambeka yentaba yase-Paardeberg, ihora elilodwa kuphela uma uhamba ngemoto (75km) ukusuka eKapa.
Lala epulazini lethu eliguquliwe iSilo futhi ujabulele imibono ephakeme emangalisayo kulo lonke elaseSwartland. Ngokuvamile ibhukhwa 'njengegumbi lethu le-Honeymoon' le yunithi ilungele lokho kuphunyuka ngempelasonto yothando noma njengendawo lapho ungahlola khona indawo.
Hlola izivini, ubhukude emadamini futhi ujabulele izindawo ezivulekile nomoya ohlanzekile phakathi kwezivini epulazini lethu lewayini elisebenzayo, eliphethwe umndeni.
Ipulazi lethu lokuqala eliguquliwe iSilo linepulani elilodwa lokulala eliyinhloko elinombhede wenkosi, ilineni likakotini eliwubukhazikhazi kanye namathawula, isiphephetha-moya (sokushisa kanye nokubanda) kanye negumbi leshawa le-en-suite elincane elinemithombo yasendaweni, ukukhethwa kwemvelo kwezinyosi. izinto zokugeza zomkhiqizo ezinikeziwe. Ikhishi elihlanganisiwe lifakwe iketela, i-toaster, i-microwave nangaphansi kwefriji. Ikhofi elithokomele, itiye, ubisi noshukela kuyatholakala kanye nama-rusks abhakwa epulazini, ama-muesli nesinkwa esisanda kubhakwa ngesidlo sakho sasekuseni sasekuseni sokuqala. Sinawo umshini we-Nespresso ongawusebenzisa futhi i-pod yamahhala yenziwa itholakalele umuntu ngamunye. Uma ufisa ukuqhubeka nokusebenzisa lo mshini sicela ulethe amaphilisi engeziwe, ngaphandle kwalokho sinekhwalithi enhle yekhofi eligayiwe elitholakalayo ukuze ulijabulele.
Kukhona indawo engaphandle enethezekile lapho ungazipholela khona kanjalo ne-outdoor barrel braai kanye nendawo yokudlela. Siyazihlinzeka ngezinkuni nezibani zomlilo, izinkuni ezengeziwe zingathengwa kithi ngo-R50 ikhreyithi ngalinye uma udinga okwengeziwe.
Wamukelekile ukuthi uzipholise edamini elincane lepulazi elingakwesokunxele sesisele, ngemuva kwesibaya onogwaja. Lokhu kwabelwana ngazo nendawo yokuhlala yezitebele. Sicela usebenzise amathawula e-pool anikezwe ekamelweni lakho.
Igumbi lenziwa isevisi nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo phakathi kuka-9am-11am, noma ngesikhathi esilungele wena. Uma ungathanda ukungasebenzisi le sevisi, noma ungathanda ukuthi singakuphazamisi ngenkathi usahlala, sicela usazise futhi sizokuhlonipha ubumfihlo bakho. Asisevi ikamelo ngamaSonto noma Ngamaholide Omphakathi, kodwa uma ufisa ukusebenzisa ezinye izinkonzo zokuhlanza ngalezi zinsuku, lokhu kungahlelwa ngezindleko ezengeziwe futhi kukhokhwe ngokheshi kumphathi wendlu yakho ngokuqondile.
Siyipulazi elisebenzayo (nakuba ipulazi lewayini!) futhi siyazithanda izilwane zethu! Ipharadesi lalabo abafuna ukuhlehla empilweni yasedolobheni. Lindela izinja ezinkulu nezivilaphayo, amahhashi, izinkukhu, amaphigogo, opholi, amagwinya, amaturkey nonogwaja. Ngokuqinisekile uzovakashelwa yizinja zasemapulazini, u-Appel, u-Sanka no-Janis. Uma ubaphakela futhi ubanaka bazokuthanda futhi babuye ngokunye (noma bangalokothi bahambe!) ngaphandle kwalokho sicela usishayele sizobasusa uma beba uhlupho.
Ihlobo lishisa KAKHULU! Gqoka isigqoko. Phakamisa i-cozie yakho. I-Suncreen ingumngane wakho!
Imibala yasekwindla mihle kakhulu. Pakisha ikhamera.
Ubusika bungabanda kakhulu futhi ngezinye izikhathi bube manzi kodwa ubuhle bamasimu e-canola ezimbalini ezigcwele yinto okungamelwe iphuthelwe. Khumbula ukugqoka izicathulo ezingokoqobo!
Intwasahlobo isho izimbali ezinhle nempova. Letha ama-antihistamine akho. Busisiwe!
Abasingathi bakho uSemma & Charl bahlala imizuzu embalwa nje ukusuka kuSilo futhi batholakala noma nini uma uba nenkinga, ukhononda noma udinga ukululekwa ngokuthi yini okufanele uyenze endaweni. Kuhlala kukhona othile mayelana nepulazi emini, kungaba sehhovisi, egumbini elingaphansi noma ezivinini, ngakho-ke sicela ukhululeke ukubingelela uma ufuna ingxoxo, kodwa sizozama ukuhlonipha ubumfihlo bakho ngaso sonke isikhathi.
Abasingathi bakho uSemma & Charl bahlala imizuzu embalwa nje ukusuka kuSilo futhi batholakala noma nini uma uba nenkinga, ukhononda noma udinga ukululekwa ngokuthi yini okufanele u…